သြင္းဂိုးေတြ ျမဴးတာၾကည့္ဖို႔ အဆင္သင့္ပဲလား! ႏွစ္သင္းေပါင္းသြင္းဂိုး ၁၅၅ ဂိုးထိရွိခဲ့ဖူးတဲ့ လီဗာပူးနဲ႔ အာဆင္နယ္တို႔ ေတြ႔ဆံုမႈလို ဘယ္ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲမွ မရွိႏိုင္ဘူး
August 24, 2019 phyo News, Premier League 0
လီဗာပူးအသင္းနည္းျပ ဂ်ာဂင္ကေလာ့ပ္ဟာ သူ႕အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားမႈေတြကို ခံစားမႈအျပည့္နဲ႔ တုံ႔ျပန္တတ္သူပါ။ ဒါေပမဲ့ သူ႕ရဲ႕ခနဲ႔တဲ့တဲ့ အၿပံဳးရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာေတာ့ ပံုျပင္အခ်ိဳ႕မ်ားရွိေနမလားမေျပာတတ္ပါဘူး။
လီဗာပူးအသင္းနဲ႔ အာဆင္နယ္အသင္းတို႔ ေတြ႔ဆံုတိုင္းသြင္းဂိုးေတြ ျမဴးတတ္ၾကၿပီး ယေန႔ညပြဲစဥ္မွာလည္း ႏွစ္ဘက္အသင္းေတြရဲ႕သြင္းဂိုးေတြကိုထပ္မံ ျမင္ေတြ႔ရဦးမလားဆိုတာေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။ “ကၽြန္ေတာ္ အ႐ိုးသားဆံုးေျပာရရင္ ဒီေန႔ပြဲစဥ္ကိုမခန္႔မွန္းတတ္ပါဘူး”
”၂ သင္းလံုးကတိုက္စစ္အားသန္ အသင္းေတြပါ၊ ခင္ဗ်ား အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႔႕ဖြဲ႕စည္းထားပံုကို ၾကည့္ၾကည့္ပါ၊ သူတို႔က positions တိုင္းမွာ အေကာင္းဆံုးကစားသမားေတြ ရွိၾကတယ္၊ တိုက္စစ္ပိုင္းကေရာ Wow အမိုက္ဆံုး၊ အျမန္ဆံုးကစားသမားေတြပါပဲ၊ ဒါေတြက တစ္ဘက္အသင္းရဲ႕ခံစစ္ကို အလုပ္႐ႈပ္ေစမွာပါ။ ကၽြန္ေတ္ာတို႔ အမ်ားႀကီးစဥ္းစားထားဖို႔ လိုပါတယ္ “လို႔ ကေလာ့ပ္ကေျပာပါတယ္။
ဒါက ကေလာ့ပ္ လုပ္ေနၾကပံုစံပါပဲ။ အစၥတန္ဘူလ္မွာ စူပါဖလားကိုကိုင္ေျမွာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၇၂ နာရီအၾကာ ၿပီးခဲ့တဲ့ စေနက ေဆာက္သမ္တန္အသင္းကိုအႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွာ ကေလာ့ပ္က ကစားသမားေတြကို ၂ ရက္ အနားေပးခဲ့ပါတယ္။
သူကအၿမဲတမ္းပံုမွန္ မဟုတ္တာေတြကိုလုပ္တတ္ပါတယ္။ တနလာၤေန႔မွာေတာ့ ကစားသမားေတြကို လူျပန္စုခဲ့တယ္။ လီဗာပူးအသင္းဟာ စူပါဖလားကိုလည္း ရယူႏိုင္ခဲ့ကာ ရာသီအစမွာ ၂ ပြဲလံုးအႏိုင္ရရွိထားၿပီး ပရီးမီးယားလိဂ္ ရမွတ္ ၆ မွတ္အျပည့္ရရွိထားပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ကေလာ့ပ္ရဲ႕အျပဳအမူေတြအရ သူအျပည့္အဝေပ်ာ္ရႊင္ ေက်နပ္ေနပံုေတာ့ မရပါဘူး။ တဖန္ အာဆင္နယ္ နည္းျပအမ္မရီကလည္း “ကၽြန္ေတ္ာတို႔ ထက္သန္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ အေျခအေနေတြနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္”
”တခ်ိဳ႔ေသာကစားသမားေတြကအသင္းကိုကူညီႏိုင္ဖို႔ အထိုင္က်ဖို႔ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီက အန္ဖီးလ္မွာလီဗာပူးအသင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားတုန္းကလိုမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကစားသမားေတြ သက္ေသျပသဖို႔ အဆင့္သင့္ ျဖစ္ေနပါၿပီ”
”ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္းလူစာရင္းက ေတာင့္တင္းၿပီးေကာင္းမြန္ေနပါၿပီ၊ ဒါက ကၽြန္ေတ္ာတို႔ကို ခြန္အားျဖစ္ေစၿပီး တက္ၾကြေစပါတယ္”လို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။
သွင်းဂိုးတွေ မြူးတာကြည့်ဖို့ အဆင်သင့်ပဲလား! နှစ်သင်းပေါင်းသွင်းဂိုး ၁၅၅ ဂိုးထိရှိခဲ့ဖူးတဲ့ လီဗာပူးနဲ့ အာဆင်နယ်တို့ တွေ့ဆုံမှုလို ဘယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲမှ မရှိနိုင်ဘူး
လီဗာပူးအသင်းနည်းပြ ဂျာဂင်ကလော့ပ်ဟာ သူ့အပေါ် မျှော်လင့်ချက်ထားမှုတွေကို ခံစားမှုအပြည့်နဲ့ တုံ့ပြန်တတ်သူပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ခနဲ့တဲ့တဲ့ အပြုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ ပုံပြင်အချို့များရှိနေမလားမပြောတတ်ပါဘူး။
လီဗာပူးအသင်းနဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းတို့ တွေ့ဆုံတိုင်းသွင်းဂိုးတွေ မြူးတတ်ကြပြီး ယနေ့ညပွဲစဉ်မှာလည်း နှစ်ဘက်အသင်းတွေရဲ့သွင်းဂိုးတွေကိုထပ်မံ မြင်တွေ့ရဦးမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ “ကျွန်တော် အရိုးသားဆုံးပြောရရင် ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုမခန့်မှန်းတတ်ပါဘူး”
”၂ သင်းလုံးကတိုက်စစ်အားသန် အသင်းတွေပါ၊ ခင်ဗျား အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းထားပုံကို ကြည့်ကြည့်ပါ၊ သူတို့က positions တိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေ ရှိကြတယ်၊ တိုက်စစ်ပိုင်းကရော Wow အမိုက်ဆုံး၊ အမြန်ဆုံးကစားသမားတွေပါပဲ၊ ဒါတွေက တစ်ဘက်အသင်းရဲ့ခံစစ်ကို အလုပ်ရှုပ်စေမှာပါ။ ကျွန်တေ်ာတို့ အများကြီးစဉ်းစားထားဖို့ လိုပါတယ် “လို့ ကလော့ပ်ကပြောပါတယ်။
ဒါက ကလော့ပ် လုပ်နေကြပုံစံပါပဲ။ အစ္စတန်ဘူလ်မှာ စူပါဖလားကိုကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ၇၂ နာရီအကြာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေက ဆောက်သမ်တန်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးချိန်မှာ ကလော့ပ်က ကစားသမားတွေကို ၂ ရက် အနားပေးခဲ့ပါတယ်။
သူကအမြဲတမ်းပုံမှန် မဟုတ်တာတွေကိုလုပ်တတ်ပါတယ်။ တနလာၤနေ့မှာတော့ ကစားသမားတွေကို လူပြန်စုခဲ့တယ်။ လီဗာပူးအသင်းဟာ စူပါဖလားကိုလည်း ရယူနိုင်ခဲ့ကာ ရာသီအစမှာ ၂ ပွဲလုံးအနိုင်ရရှိထားပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ရမှတ် ၆ မှတ်အပြည့်ရရှိထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကလော့ပ်ရဲ့အပြုအမူတွေအရ သူအပြည့်အဝပျော်ရွှင် ကျေနပ်နေပုံတော့ မရပါဘူး။ တဖန် အာဆင်နယ် နည်းပြအမ်မရီကလည်း “ကျွန်တေ်ာတို့ ထက်သန်တဲ့ စိတ်ဓာတ် အခြေအနေတွေနဲ့ အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ထားပါတယ်”
”တချို့သောကစားသမားတွေကအသင်းကိုကူညီနိုင်ဖို့ အထိုင်ကျဖို့ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အန်ဖီးလ်မှာလီဗာပူးအသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားတုန်းကလိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ကစားသမားတွေ သက်သေပြသဖို့ အဆင့်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ”
”ကျွန်တော်တို့ အသင်းလူစာရင်းက တောင့်တင်းပြီးကောင်းမွန်နေပါပြီ၊ ဒါက ကျွန်တေ်ာတို့ကို ခွန်အားဖြစ်စေပြီး တက်ကြွစေပါတယ်”လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
သူ႔ရဲ႕အခက္ခဲဆုံးၿပိဳင္ဘက္နဲ႔ တြဲကစားဖူးသူေတြထဲက အေကာင္းဆုံးကစားသမားကို ဖြင့္ဟလုိက္တဲ့ဗန္ဒစ္ဂ်္
ဆီဗီလာကစားသမားရဲ့ အင်္ကျီကို ဆွဲပြီး တားဆီးမှုကိုတောင် ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီ February 28, 2021
PSG နည်းပြဘဝတုန်းက ဘရူနိုကို ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ဖူးတယ်လို့ တူချယ် ဝန်ခံ February 28, 2021
ပွဲ ၂၀ ဆက် အနိုင်ယူ ဂုဏ်ဆာနိုင်တဲ့ ဂွာဒီယိုလာရဲ့စကား February 28, 2021
မာရှယ် အပေါ် ဝေဖန်နေမှုများကို ဆိုးရှား တုံ့ပြန်ပြောကြား February 28, 2021
ဖာနန်ဒက်စ်ကို ခေါ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးတဲ့ တူချယ်လ် February 28, 2021
ဆီဗီလာကစားသမားရဲ့ အင်္ကျီကို ဆွဲပြီး တားဆီးမှုကိုတောင် ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီ
PSG နည်းပြဘဝတုန်းက ဘရူနိုကို ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ဖူးတယ်လို့ တူချယ် ဝန်ခံ
ပွဲ ၂၀ ဆက် အနိုင်ယူ ဂုဏ်ဆာနိုင်တဲ့ ဂွာဒီယိုလာရဲ့စကား
မာရှယ် အပေါ် ဝေဖန်နေမှုများကို ဆိုးရှား တုံ့ပြန်ပြောကြား
ဖာနန်ဒက်စ်ကို ခေါ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးတဲ့ တူချယ်လ်